“Doorasho Dalka Ka Qabsoomi Karta Bisha March 2019 Ma Muuqato…” Siyaasi Cali Guray |
“Doorasho Dalka Ka Qabsoomi Karta Bisha March 2019 Ma Muuqato…” Siyaasi Cali Guray
Doorashooyinka bisha March ee kal dame loo mudeeyay malahayga ma qabsoomi doonaan wakhtiga loo cayimay. Hadii April iyo Mayna ay dib uga dhacaan adigu waa suurtogal inta aanu dhamaanin 2019ku inay qabsoomi karaan. Hadii ay dhacdo doorasho Barlamanka cusub ee kan bedeli doonaa ma wuxu noqon mid muxaafidku (Kulmiye) ku guulaysto inu hogaamiyo? Mise waxa laga yaabaa in mucaaridku ku guulaysto oo Aqalka Wakiilada uu mucaaridku la wareego mar kale sidii dhacday 2005tii markii la doortay kuwan laftooda.
Intii uu xilka qabtay Madaxwayne Muuse Biixi waxa la filayaa inay dhacdo muddo kordhin markii ugu horeysay ah inay tii ugu dambaysay noqon iyo in kalena aan la saadaalin karin. Xildhibaanada Wakiiladu iyagu way ka tashadeen in aan doorashadoodu ka qabsoomin dalka ee ay muddo kordhimo kale yimaadaan. Waxay ka tashadeen markii ay dhamaantood isku raaceen, XEERKII HORE TUUR KU DAMBENA DIID. Ilaa maalintii ay taladaa gaadheen xeerkii hore iyo xeer dambe oo cusub midna lama hayo haddii iyaga laga sugona waa siday rabeen oo wax doorasho baarlaman ahi dalka ka qabsoomi mayso. Markaa maxaa tolow xal ah? yaase kale ee ku maqan xal si ay doorasho dalka uga qabsoomi karto?
Wadahadalkii ay ku kala kaceen xisbiyadu hadii sidaa lagu kala tago oo aan waxba la isla meel dhigin ma laga yaabaa in xaaladdu ay gaadhi karto heer labada xisbi ee mucaardku ay isku raacaan inay doorashada qaadacaan? Hadii jawaabtu ay tahay maya markaa xal wuu jiraa oo haddii ugu yaraan ay laba xisbi u tartamaan kuraasida Wakiilada siyiba si bay dhaantaaye waa sahaala. Laakiin haddii ay labaduba qaadacaan taa macnaheedu saw maaha doorasho dhiciba mayso?
Hadda waxa la isku hayo ee lagu kala tegayna maaha arin culus mana aha wax ka soo horeeyay doorashada ama khuseeya Komishankan inta ka hadhay muddo xileedkiisa ee sida aan maqlay waa komishanka kan ka dambeeya 2020ka